Kubereka Uye Kubhururuka Vagadziri & Vatengesi - China Kubereka Uye Kubhururuka Fekitori
Inoratidza Mafuta-akaiswa mushonga mudumbu; Kuzvidzora-kupfeka Pfeka kusagadzikana uye hupenyu hwakareba sevhisi Kukwirisa kuita kunogona kuve mukuremerwa kwakanyanya, kumhanya kwakaderera kudzora uye kushomeka mafomu.Inokodzera yakakwira static mutoro Inogona kuiswa mune yakanyanya tembiricha Kwakanyanya ngura kuramba Kuratidzwa: Kushivirira kwakazara kwemukati dhayamita. dhayamita S7 Kurudzira shaft shiviriro f7 / g6 Kurudzira dzimba shiviriro H7 Kavha & Kutumira Kupakata Detai ...
Oiri Yakatemerwa Graphite Kubereka uye bushing
tures Oiri-yakasimudzwa; Kuzvidzora-kupfeka Pfeka husingagumi uye hupenyu hwakareba sevhisi Kukwirisa kuita kungave kuri kwakanyanya mutoro, kudzika kumhanya kuchidzosera uye kudzikisira mafomu. Yakanaka yekupisa yekudzivirira zvinhu Inogona kushandiswa mune yakasviba uye inoparadza nharaunda Ruzha rwakanyanya zvishoma pane kumwe kutakura Inokodzera yakakwira static mutoro Inogona kuiswa. mune yakawanda tembiricha yakanaka kuramba kuvharirwa, ngura inodzivirira, girizi inopesana neunyoro plasticity kusimba, weldabil ...